हामी भौतिक विकासले पछि छौं । खानका लागि प्रशस्त अन्न छैन । देशमा जबर्जस्ती युद्ध थुपार्ने र हतियारको व्यापार गर्ने खेलमा हामीले कतै हतियार खरिद र व्यारेक निर्माणका लागि अर्बौं खर्च गरेका त छैनौं ? भोलि हतियार किन्दा र विदेशबाट खानेकुराका आयात गर्दा बजेट सकिएर देशै टाट उल्टिने त होइन ? डल्ला फ्याँक्न र गोला पड्काउने शक्ति आर्जन गर्न पनि अन्नपात, फलफूल त चाहिन्छ नै । भोको पेटले डल्लाफ्याँक्न र गोला पड्काउन सक्दैन होला ।
कृषि अनुसन्धान र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम अगाडि बढाउन र गोलाबारुदको आयात र प्रयोग न्यून गर्नसके मात्र बुद्ध जन्मेको देशले विश्व समुदायलाई दिने सन्देशको सार्थकता होला । क्रिकेट रंगशालाका लागि जग्गा खरिद गर्ने पैसाको जोहो गर्नसक्ने सामर्थ्य राख्ने धुर्मुस–सुन्तलीजीलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध— क्रिकेट रंगशाला चितवनमै बन्नुपर्छ, तर कि अर्को जग्गामा कित कृषि अनुसन्धानचाहिँ अर्को जग्गामा ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:३९